Sọpụrụ 20i: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Honor 20i: Uzo ohuru ohuru nke ika
Honor nwere nkwalite ole na ole ruo afọ a, ọ bụ ezie na akara ndị China na-eburu ijeụkwụ. N'ihi na nke nta nke nta ekwentị ọhụrụ malitere ịbata maka ya. Ọ bụ oge nke Honor 20i, nke e gosipụtara na eze na China, ebe ọ ga-ekwe omume idobe ya, dịka a mụtara. Ọ bụ ekwentị ọhụrụ maka akara ngosi kachasị dị n'etiti akara ngosi.
N'oge a anyị amaghị mgbe ekwentị a ga-amalite ụwa, ọ bụ ezie na a na-atụ anya na Honor 20i a ga-enwe mmalite na mpụga China. Ma ewepụla na ọ ga-abịa na aha ọzọ, Dị ka ọ dịlarị na ekwentị ndị ọzọ nke ika ahụ.
Na ọkwa nhazi anyị nwere ike ịhụ na ekwentị na - agbaso usoro ahịa, na mgbakwunye na ịhụ ihe anyị na - ahụkarị n'ọtụtụ ahịa. Ihuenyo nwere akara n'ụdị ọdịdị mmiri, mgbe n'azụ anyị nwere igwefoto atọ. Na mgbakwunye, akara a na-etinye aka na agba gradient nke Huawei mere ejiji n'afọ gara aga.
Huawei P30 Lite bụzi ọrụ
1 Nkọwa Honor 20i
Nkọwa Honor 20i
Maka nkọwa ya, anyị nwere ike ịhụ na akara ndị China amatala etiti ugbu a na gam akporo. Ebe ọ bụ na etinyere ọtụtụ kamera, o doro anya na ha bụ otu n’ime ike na ekwentị a. Na akụkụ, ị pụrụ ịhụ dị ka nsụgharị nke P30 Lite. Ndị a bụ nkọwa nke Honor 20i:
Ihuenyo: 6,21 sentimita asatọ na mkpebi FullHD + mkpebi 2.340 x 1.080 na 19,5: 9 ruru
Nhazi: Ogbogu Okonki
Nchekwa ime: 64/128/256 GB (Gbasaa ruo 512 GB na microSD)
Igwefoto na-aga n'ihu: 24 MP nwere oghere f / 1.8 + 8 MP nwere oghere f / 2.4 + 2 MP nwere oghere f / 2.4
Usoro njikwa: Akara 9 Android na EMUI 9
Batrị: 3.400 mAh na chaja 10W
Njikọ: 4G, WiFi 802.11 a / c, MicroUSB, 3,5mm Jack, Bluetooth,
ndị ọzọ: Rear mkpisiaka agụ, Face Kpọghe, GPU Turbo
Akụkụ: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm
O nwekwara ike ichetara ọtụtụ ndị Na-asọpụrụ 10 Lite, nke bu eziokwu bu na ha nwere ihe ndi ozo. Agbanyeghị na nke a, akara ndị China na-ewebata igwefoto azụ atọ na ekwentị. Camerasfọdụ ese foto ndị doro anya bụ isi mmewere nke ya, ebe ọ bụ na ha na-ahapụrụ gị ezigbo mmetụta. Ma ese foto azụ na n'ihu, ebe ọ choro maka ihe mmetụta 32 MP. N'ụzọ dị otú a, ha na-ebute ụzọ na Xiaomi, nke rutere na ihe atụ nwere igwefoto n'ihu nke 32 MP na njedebe nke ọnwa.
Igwefoto nke a Honor 20i na-akwado site na ọgụgụ isi. Nke ga - enyere anyị aka ịchọpụta ihe nkiri, na mgbakwunye na mmetụta dịgasị iche iche na foto. Ihe bụ ihe ọzọ, ekwentị na-abịa na GPU Turbo 2.0, ụdị ọhụrụ nke ngwanrọ a, nke anyị na-ahụ na ekwentị nke ika ahụ ma na-enyere aka melite arụmọrụ mgbe ị na-egwu egwuregwu.
Anyị na-achọta ọtụtụ nsụgharị nke Honor 20i na usoro nke RAM na ohere nchekwa. Nchikota ndi oru gha acho ịhọrọ: 4GB / 128GB, 6GB / 64GB na 6GB / 256GB. Ma ọ dịkarịa ala dị ka ebe nrụọrụ weebụ Vmall dị na China, ebe a ga-ebupụta ya n'izu a, na Eprel 18. Ọ bụ ezie na enweghị ozi ruo ugbu a gbasara mbupụta mba ụwa ga-ekwe omume.
Anyị enweghị data na ọnụahịa nke ahụ ga-enwe ụdị nsụgharị ndị a na China. Ọ bụ ezie na ekwentị ahụ rutere n'ụlọ ahịa n'izu a, n'ihi ya, na ụbọchị ole na ole, anyị ga-enwe data niile na ya. Anyị na-atụ anya ịnụ ihe ọzọ n'izu a banyere mmalite nke ekwentị a. Ebe ọ bụ na ụkpụrụ a gosipụtara ya dị ka ezigbo nhọrọ na nke ya.
Ekwela ka nke ahụ mee see Spanish ahịa n'oge opupu ihe ubi a. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume na ọ na-eme ya na aha dị iche, dịka o meworị na ekwentị ụlọ ọrụ ndị ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị nwere olile anya ịnweta ozi gbasara Honor 20i a n'oge na-adịghị anya na ihe anyị nwere ike ịtụ anya na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Honor 20i: Uzo ohuru ohuru nke ika
Galaxy A2 Core: Samsung ọhụrụ na gam akporo Go